January 2021 | Myanmar Retailers Association
ျမန္မာနိုင္ငံ လက္လီ‌ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ သတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစုံညီအစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ -၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ (အဂၤါေန႔)
အခ်ိန္ -ေန႔လည္ ၃နာရီ မွ ၄ နာရီ ၃၀မိနစ္အထိ
Meeting ID : 825 4470 4014
Passcode : 882490
We are proud to announce the launch of the nationwide Safe Store Campaign with the support of AYA PAY, Coca-Cola Myanmar, Nestle Myanmar and Unilever Myanmar, to encourage retailers to create hygienic and safe shopping environment for consumers by following the Ministry of Health and Sports guidelines and measures.
We would like to welcome retailers across Myanmar to participate in this campaign for consumers to feel confident that their regular next-door shop has created safe shopping environment for them by following the health and safety measures.
Details on how to participate in the campaign will be shared inaseparate post on our Facebook page.
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှစီစဉ်ပြီး Aya Pay, Coca-Cola Myanmar, Nestle Myanmar နဲ့ Unilever Myanmar တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးထားတဲ့ Safe Store ကမ်ပိန်း အစီအစဉ်ကို ဂုဏ်ယူစွာမိတ်ဆက်ပါရစေ။ ဒီကမ်ပိန်းဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှာ စျေးဝယ်သူများအတွက် ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးကင်းရေးသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီလိုက်နာဖို့ နှိုးဆော်အားပေးသွားမယ့် အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်လီစတိုးဆိုင်များအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘေးကင်းရေးသတ်မှတ်ချက်များနဲ့အညီ လိုက်နာ ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့် စျေးဝယ်များအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့အနီးအနားက စတိုးဆိုင်တွေမှာ စျေးဝယ်ဖို့ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ရရှိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ လက်လီဆိုင်ရှင်တွေအားလုံးကို ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ဒီအစီအစဉ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလည်း ဒီ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။